Linn Ko: Convert .deb to .ipa Easily
အားလုံးဆီ ဖြန့်ဝေပေးချင်တယ့် ဆန္ဒနဲ့ MMSD မှ ကိုဖြိုးချမ်း တင်ထားတယ့် Post လေးကို မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....
သတိမမူဂူမမြင်ဆိုတဲ့ စကားလေးက အမှန်သားဗျ။ဒီ နည်းလေး ကနည်း သိရင်တော့ လွယ်လွယ်လေးပေါ့ ဗျာ။ဒီနည်းလေးကို ကျွန်တော် Jailbreak မလုပ် ဖူးသေးခင် တည်း က ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့တာ ပါ။ တော်တော် လေး ကြာ ပါပြီ။အခု နည်း နှစ်နည်းနဲ့ လုပ်ပြ သွားမှာ ပါ။
ပထမနည်း က iTool နဲ့ iTune ရှိရင် ရပါပြီ။ ကျွန်တော် quick lock.deb လေးကို အစမ်းပြောင်းပြ ပေးသွားမှာပါ။ အရင်ဆုံး cyida က နေ quick lock လေးကို Install လုပ် ပါ။ပြီးရင် iTool နဲ့ ဖုန်းကို ချိတ်လိုက် ပါ။ ပြီးရင် iTool ကနေ ဒီ QuickLock.app ဆိုတဲ့ Folder လေး ရအောင် ထုတ် ရမှာပါ။
iTool>>file system>>Apps(User)>>app(ကိုယ် ထု တ် မဲ့ application name)Folder ကို Right Click နဲ့ Copy to Local ကနေ Destop ပေါ်တင်လိုက်ပါ။ပုံမှာလည်းပြထား ပါ တယ်။ ဒီ ကနေ လဲ သွားလို့ရတယ် ။( iTool >> File System >> File System(Jailbreaked) >> var >> mobile >> Applications )
ရလာတဲ့ QuickLock.app Folder လေး ကို iTune က Add to Folder Libray က နေ Add လုပ် ရ မှာ ပါ။
Add ပြီး ရင် iTune က Folder က နေ Auto ipa Change ပေး လို့ Applicton လေးကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီ Application ကို Right Clcik>>Show in Windows Exploer လို့ လုပ် ရင် ipa ပြောင်း သွားတဲ့ Application လေး ကို တွေ့ရ ပါမယ်။
ကဲ quicklock.ipa လေးရ သွား ပါပြီ ။ ထုံး စံ တမ်း Appsync သွင်း ပြီး iTool နဲ့ ဖြစ်စေ iTune က နေ ပဲ ဖြစ်စေ အ လွယ် တ ကူ ထည့် လို့ ရ သွား ပါ ပြီ။လွယ် တယ် မ ပာုတ် လား ။ နည်း မ သိ ရ င်ေ တာ့ Programming တွေ လို မယ် ထင် လိမ့် မယ်။
(မှတ် ချက် iTune Latest Verison တွေ မှာ Menu Bar Hide ထားတတ် ပါ တယ် ။ ဒီ မှာ ပုံ နဲ့ ပြ ထား ပါ တယ်။ Show လုပ် ပေး လိုက် ပါ။)
နောက် တစ် နည်း က တော့ 7zip Software သုံးပြီး quicklock.deb က နေ ပြောင်းမှာပါ။
7zip မရှိရင် ဒေါင်းရန်
7zip Install ပြီး သွား ရင် deb ဖိုင် ကို Right Click>>7Zip>>Open Archive နဲ့ ဖွင့်ရမှာပါ။အထဲမှာ data.tar တွေ့မှာ ပါ ။ Click နှိပ်ပြီးထပ်ဝင်ပါ။ Application>>quilcklock.app Folder ကို Drag and Drop ဆွဲပြီး Destop ပုံတင်ပါ။
အပေါ် က အဆင့်ပြန်ရောက် သွား ပြီနော်။ iTune က နေ Add လိုက် ပါတော့။
အဲဒီ လို မလုပ် ချင် ရင် ခု န quicklock.app ကို 7zip သုံးပြီး Zip ပြောင်းပါ။ပြီးရင် Extension ကို .zip က နေ .ipa ပြောင်းလိုက်ပါ။
ကဲ ipa ပြောင်း ပြီး တော့ Custom Logo လေး Change နည်းပါ ဆက်ပြော ပေး ပါ့မယ်။
1. Change the .ipa to .zip and unzip it
2. Open the Payload Folder look at the contents in the appname.app
3. Copy the icon.png to desktop
4. Change the name of the copy of icon.png to iTunesArtwork and also remove the .png extension
5. Compress both iTunesArtwork and Payload together
6. Change the Archive.zip into appname.ipa
7. Open with iTunes and your done
Kyaw Zin Linn
Credit to Phyo Chan(Admin at MMSD)
Posted by Linn Ko at 5:33 PM